တင်ဒါကြေငြာချက် - လျှပ်စစ်နှင့်အချက်ပြစနစ်အတွက်Bayındır, တုိုင်းနှင့်Ödemişဘူတာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်း - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းကမ်းနား၏လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လှသင်တန်းကိုဖြည့်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 37 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့ »
ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး, တုရုလမ်းÖdemişဘူတာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် signal စနစ်များ Alignment
ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး, တုရုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှÖdemişဘူတာလမ်းနှင့် signal စနစ်များ Alignment ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 447258
950 မီတာလိုင်းဖယ်ရှားရေး, လမ်း 1400 မီတာ Fersi
ခ) Place: ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး, တုရုÖdemiş / İZMİR
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag-Ödemişတုရုမြို့လိုင်း Cut-to-လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံYaptırılacaktır 15 / 12 / 2017 အိတ်-odemis-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံYaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အိတ်စွပ်-odemis-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 567675 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: စီးပွားရေး ANAFARTALAR mAh ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ပြိုင်ကားကွင်း CAD ။ NO:306280 GAR side ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0312 309 05 15 / 4111 - 4161 -0312 311 53 05 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag (ဖယ်ထုတ်လိုက်) Yaptırılacaktır Cut မှ-Öde-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပင်များ 03 / 05 / 2018 အိတ်များ-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့-Ödeလိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား်ဆောင်မှုများYaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအိတ် ( မှလွဲ. ) 4734 ၏လြှပျစစျမီးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်လျှော့ချ-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့လိုင်းရှိ-Öde ( မှလွဲ. ) အပိုဒ်အားဖြင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 201873 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ Anafartalar ခရိုင် Hippodrome Caddesi အဘယ်သူမျှမများ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး:3ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4111 / 4161 - 3123115305 က c ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tcdd@tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
အိတ် odemis လမ်းဆုံလမ်းခွတုရုမြို့လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ် Cut 04 / 06 / 2018 အိတ်အမဲချိတ်တုရုမြို့လျှပ်စစ်မီးလိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းသို့ကန်ထရိုက်အလုပ်လုပ်တယ် odemis ( မှလွဲ. ) ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။ 2018 TL Bag ( မှလွဲ. ) အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ 201873 / 37.409.277,03 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 44.890.304,46 TL ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှုလမ်းဆုံလမ်းခွတုရုမြို့လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်5ကုမ္ပဏီများတင်ဒါဖို့လြှပျစစျမီးအဆောက်အလေလံတင်သွင်းလျှော့ချ odemis ။ နုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရအနိုင်ရလေလံyapılacakv JCC သွင်းယူခြင်းဖြင့်ရှင်းပြခဲ့လိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတင်ဒါလေလံနဲ့လေလံနေသောခေါင်းစဉ်: £ 1 43.997.134,00 2-Emre Ray-စွမ်းအင်အဆောက်အအုံ Center က 49.691.432,003နှုန်း-Kolin ဆောက်လုပ်ရေး + က ARM ဆန်ခါ။ £ 49.990.628,00452.694.502,00 နည်းပညာက Ultra-per-5 + Elsitel ဆောက်လုပ်ရေးသူငယ်တော်ဖွားမြင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အသစ်ထူထောင် TMI အလုပ်ကိုက်ညီဖို့ဂြိုလ်တုဖုန်းကိုစနစ်၏ Elazig နှင့် Tatvan 16 အပိုင်းပိုင်းအကြားလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စက်ခေါင်း 07 / 10 / 2015 Tatvan STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 16 ၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်5TM အလိုအလျောက်ဂြိုဟ်တုဖုန်းကိုယူနစ်အသစ်ထူထောင်သည့်စနစ် လိုက်. ခံရဖို့ Elazig-လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များရန်။ Make စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 16 အမှတ်သင့်လျော် REGION ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးELAZIĞ TATVAN အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှုရည်ရွယ်ချက်စက်ခေါင်း 4734 ဂြိုဟ်တုအသစ်ထူထောင် TMI တယ်လီဖုန်းစနစ်ကိုအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 131295 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျလမ်းပေါ်မှ STATION ကို 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag - စခန်းများကာကွယ်ကွိကြားနာကိသုများနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွ -triene လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး 16 / 09 / 2014 TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölg Bag - လေလံ AND SUBJECT ကို FOR စီးပွားရေးနူးညံ့ပြုလုပ်ခြင်းစခန်းများကာကွယ်ကွိကြားနာကိသုများနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွ -triene အပိုဒ် 3- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 အရေးကြီး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 1.1 / A3Alsancak / IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 121 352200232 464 / 31 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 31 41080232 464 - 77 98 0232 463 င) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ: xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.t ။ f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ: ကော်မရှင်၏ဂြိုလ်သား ME ဗျူရိုဦးစီးချုပ်။ 16 ... ။
အဆိုပါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး, ဖြစ်လြှပျစစျမီးနဲ့ signal စနစ်များ Alignment, အချက်ပြ, TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag-Ödemişတုရုမြို့လိုင်း Cut-to-လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံYaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag (ဖယ်ထုတ်လိုက်) Yaptırılacaktır Cut မှ-Öde-လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပင်များ
အိတ် odemis လမ်းဆုံလမ်းခွတုရုမြို့လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ် Cut
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အသစ်ထူထောင် TMI အလုပ်ကိုက်ညီဖို့ဂြိုလ်တုဖုန်းကိုစနစ်၏ Elazig နှင့် Tatvan 16 အပိုင်းပိုင်းအကြားလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စက်ခေါင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bag - စခန်းများကာကွယ်ကွိကြားနာကိသုများနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွ -triene လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလျှပ်စစ်ဓာတ်အား Gabarie ၏ Alignment နှင့်အတူစစ်ဆေးခြင်းစက်၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Project မှဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (သင့်လျော်သော Hale ကချဉ်းကပ်ရန်နည်းလမ်းများကျေပွန်စွာသည်အဆင့် Crossing)
ချဉ်းကပ်လမ်းအဆင့် Crossing အကောင်အထည်ဖော်မှုစီမံကိန်းကို Alignment ၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 300.000 အရေအတွက် Hm ရထားလမ်းစွဲစေသည့်စနစ်သင့်လျော်သောနွေဦးညှပ်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူရန်